Ideal-Lume Pro avy amin'ny jiro MediaLight Desk - Lighting Bias MediaLight
Home Ideal-Lume Pro an'i MediaLight Desk Lamp
Ideal-Lume Pro an'i MediaLight Desk Lamp
Vidiny tany am-boalohany $99.95
Vidiny tany am-boalohany $99.95 - Vidiny tany am-boalohany $99.95
Vidiny ankehitriny $89.95
Ny jiro birao Ideal-Lume ™ Pro avy amin'ny hazavana MediaLight LED dia natao hanompoana ny jiro fanaraha-maso faritra amin'ny console amin'ny famoahana loko mavesatra. Natao hanomezana hazavana midina any an-toerana izay mifanaraka amin'ny filazalazana CIE D65 voatondro ho an'ny hazavana manodidina rehefa miasa amin'ny programa video.
Ny hood mainty mainty azo esorina dia nampiana mba hisorohana ny taratry ny efijery monitor amin'ny LED. Omena ny fanamaivanana mba hanitsiana ny fivoahan'ny hazavana raha ilaina izany.
Ny fampiasana an'ity vokatra ity dia mamela ny fanarahana ny fenitra SMPTE farany sy ny tolo-kevitra momba ny toetoetran'ny tontolo iainana mijery.
6500K - Simulated D65, misy ny puce Colorgrade Mk2 SMD
Milamina tsy miova loko
Fanafanana eo noho eo
30,000 ora fiainana
110V AC 60Hz na 220v-230v AC 50Hz (alefanay ny plug mifandraika mifototra amin'ny tanin'ny mpanjifa)
Ny zoro zana-kazo 80 ° - 120 ° misy / tsy misy hood
Ahitana adaptatera 110v AC Amerikana Avaratra
Warranty voafetra 3 taona
5.0 Miorina amin'ny 7 Reviews
Kalitao tena tsara. Tsara endrika
Vokatra tena tsara izy io.
I manampy izany? 2 0
Mazava ho azy fa tsara ho an'ny fanaraha-maso mazava
MediaLight's Desk Lamp no vahaolana tsara indrindra hitako handrafetana ny jiro amin'ny faritra fitendry sy totozy eo amin'ny toeran'ny birao iMac Retina 5K. Kely kokoa izy io, manana gooseneck malefaka kokoa, mifanaraka amin'ny fenitra SMPTE hijerena referansa, ary azo maizina kokoa, raha ampitahaina amin'ny jiro birao LED "mazava antoandro" an'ny mpamokatra iray hafa, nampiasaiko. Tsy matihanina amin'ny fampielezam-peo aho, fa te hiasa miaraka amin'ny fanelingelenana kely ao amin'ny efitrano maizina. Te-hanao horonan-tsary hapetraka ao amin'ny YouTube aho ary te-hanao fanitsiana ny lokon'ny loko video. Manana kofehy mainty aho mba hialana amin'ny tara-masoandro. Ny rindrin'ny efitrano dia voaloko gray 18% volondavenona tsy mitongilana (Munsell N5), ary mampiasa jiro fiasa miaraka amin'ireo vokatra MediaLight aho. Ny Ideal-Lume® Pro avy amin'ny MediaLight Desk Lamp dia mametraka ny hazavana 6500K (CIE mahazatra manazava D65 "fotsy fotsy"), an'ny CRI avo iray, izay tadiaviko.
I manampy izany? 3 0
Mazava be ny antsipiriany ao amin'ny tranonkala. Taorian'ny fividianana dia nahazo fanavaozana teo noho eo aho ary ny jiro dia nalefa tany Netherlands tamin'ny fomba voaangona tsara. Fandefasana haingana ary mbola manan-danja kokoa aza: vokatra namboarina tsara izay tokony ho natsipiko tao amin'ny efitranoko. Tena soso-kevitra!
I manampy izany? 1 0
Mampiasako jiro tsy mitongilana ity jiro ity satria tsy te-hametaka jiro amin'ny monitor-ko aho. Mety tsara ho an'ity tanjona ity! Mazava ho azy ny havizanan'ny maso, ary mahatonga ny sary ho voajanahary sy mahafinaritra kokoa.